खाडीबाट नेपाल आएका युवकमा देखियो कोरना भाइरस, कुन एयरको जहाजमा कहिले नेपाल आए भन्ने खुल्न बाँकी ! – Etajakhabar
खाडीबाट नेपाल आएका युवकमा देखियो कोरना भाइरस, कुन एयरको जहाजमा कहिले नेपाल आए भन्ने खुल्न बाँकी !
काठमाडौं- नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट संक्रमितको संख्या तीन पुगेको छ। आज थप एक जनामा काेराेनाकाे संक्रमण देखिएकाे हाे। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गरिएको नमुना परीक्षणमा थप एकजनामा पोजेटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता सागर दाहालले तेस्रो व्यक्तिमा कोभिड-१९ देखिएको पुष्टि गरेका छन्।
प्रयोगशाला सूचना अधिकारीले मंगलबार गरिएको परीक्षणमा थप एकजनामा पोजिटिभ देखिएको बताए। बुधबार मात्रै रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हो। ती युवा खाडी मुलुकबाट आएकाउनले जानकारी दिए। उनी कुन एयरको जहाजमा कहिले नेपाल आए भन्ने खुल्न बाँकी छ।
प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएपछि ती सङ्क्रमित व्यक्तिलाई उपचारका लागि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अलग्ग राखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार ३०-३१ वर्षका ती बिरामी केही दिनअघि एक खाडी मुलुकबाट नेपाल आएका हुन्।
विभिन्न लक्षणसहित अस्पतालमा भर्ना भएका ती युवकबाट सङ्कलित नमुनाको पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गरिएको थियो। ती युवा अहिले टेकु अस्पतालको आइसोलेनसमा उपचाररत छन्। विस्तृत जानकारी उपलब्ध नभइसकेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पनि कोरोना संक्रमित व्यक्तिको संख्या तीन पुगेको उल्लेख छ।
नेपालमा अहिलेसम्म ६८७ जनाको नमुना परीक्षण भएकाे छ। जसमध्ये ६८४ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने ३ जनाकाे रिपाेर्ट पाेजेटिभ आएकाे छ। यसअघि गत आइतबार फ्रान्सबाट आएकी एक १९ वर्षीय युवतीमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो।
Posted on: Wednesday, March 25, 2020 Time: 13:11:36
-12367 second ago
-10896 second ago
-6688 second ago
-3298 second ago
-2396 second ago